SomaliaReport: Weerarada oo Meel Sare Gaadhsiiyey B/Badeedka
Weerarada Budhcad-badeedda ee Soomaaliya ayaa saddexdii bilood ee sanadkan 2011-ka cirka isku shareeray, iyada oo ay si lixaadsanayaan hawlgalladooda. Xafiiska arimaha badaha ee caalamiga ayaa khamiistii sidaa sheegay.
147-kii weerar ee daafaha caalamka ka dhacay, 97 ka mid ahi waxay ka dhaceen Soomaaliya, 35-kaliya ayaa la ogyahay inay isku xilli dhaceen sanadkii tagay. 18kii Markab ee la afduubay 15 ka mid ah waxay ahaayeen kuwo laga afduubtay xeebaha bari ee Soomaaliya, badaha carbeed iyo mid laga afduubtay gacanka Cadan. Xafiiska arimaha badaha (IBM) ayaa sidaa sheegay. In kasta oo ay maraakiibta dagaalka ee caalamiga ahi ay sanado badan ilaalinayeen gacanka cadan, haddana iska daa inay ku guulaystaan xakamaynta weerarada budhcad-badeedda ee sii kordhaya ‘e, waxay noqotay inay budhcad badeeddu raadsadaan meelo kale ay wax ka ugaadhsadaan.
Agaasimaha xafiiska caalamiga ee arimaha badda ayaa yidhi “ Waxaan aragnaa in weerarada iyo xeeladaha ay budhcad-badeeda Soomaaliya la soo baxeen ay sii kordhayso”.
Ilaa iyo 299 ruux ayaa la qafaashay, lix kalkena waxaa lagala degay markabkay saarnaayeen oo ku sugnaa Soomaaliya saddexdii bilood ee sanadkan u horeeyey. Shaqaale gaadhaya 596 oo ku kala sugnaa ilaa 28 maraakiib ayaa noqday la-haysteyaal sida ku cad tirokoobka la sameeyey. Waxaana sidaa sheegay xafiiska wararka badda ee caalamiga (IMB). Intaa wixii ka danbeeyeyse waxay budhcad badeeddu sii daayeen maraakiibtii ay ka midka ahaayeen Beluga Nomination, Thor Nexus, iyo VLCC Irene SL, shaqaalaha maraakiibtaa saarnaa ayaa gaadhaya 62. Waxaa sidoo kale la afduubtay markabkii MV Susan K oo ay saarnaayeen 10 shaqaale.
Markabka VLCC Irene SL,oo ay saarnayd saliidda caydhiin ee Kuwait laga keeno, taasoo qiimaheedu gaadhayo 200 oo Milliyan oo dollar ayaa la sii daayey ka dib markii lagu furtay lacag gaadhaysa 13.5 Millyan oo dollar sida ay ilaha wararka baddu soo tabiyeen.
Mukudan ayaa sheegay in maraakiibta xamuulka ee sida saliidda iyo walxaha qarxa ee kiimikadu ay khatar u yihiin weerarada hubka la isku adeegsado.
“Saddex maraakiibta waaweyn ah oo ay saarnaayeen xamuul gaadhaya 100,000 oo tan ayaa sanadkan gudihiisa lagu afduubtay geeska afrika. 37 ka mid ah 97-ka la afduubtay waxay ahaayeen maraakiibtan, 20 ka mid ah waxay wadeen xamuul gaadhaya 100,000 oo tan” ayuu yidhi Mukundan.
Wuxuu ku baaqay Mukundun in tallaabo adag la qaado si maraakiibtan waaweyn looga ilaaliyo afduubidda isaga oo intaa raaciyey in meelaha ay ku sugan yihiin la ogyahay.